सुरक्षाको करियर चम्काउने अभिभारा दीपेन्द्रलाई ? | My News Nepal
सुरक्षाको करियर चम्काउने अभिभारा दीपेन्द्रलाई ?
काठमाडौं । बक्सअफिसमा हिट साबित भएको फिल्म 'पशुपतिप्रसाद'का निर्देशक, साथै अहिलेका चलेका निर्देशक हुन् दीपेन्द्र के. खनाल, । मौलिक फिल्म निर्माण गर्ने निर्देशकको रुपमा आफूलाई स्थापित गरेका उनीसँग फिल्म गर्न चाहने कलाकारहरुको ठूलै भीड छ । उनका फिल्म भनेपछि दर्शकमा पनि निकै चासो हुने गर्दछ ।
उनको फिल्ममा काम गरेपछि करियर निर्माणमा एउटा दरिलो इट्टा थपिने विश्वास नयाँ तथा पुराना कलाकारमा व्याप्त छ । ‘चपली हाइट’ को दुई सिरिज, ‘धनपति’, ‘भिजिलान्ते’, ‘द युगदेखि युगसम्म’ फिल्म निर्देशन गरिसकेका उनको फ्रेस रिलिज फिल्म ‘चंगा चेट’ हो । 'लजिक' खोज्ने दर्शकलाई उनको फिल्म निकै मनपर्छ । हाल उनी एक नयाँ प्रोजेक्टको तयारीमा छन् ।
हरेक फिल्ममा 'एक्सपेरिमेन्ट' गर्न चाहने दीपेन्द्र अहिले आफ्ना हरेक फिल्ममा एक नायिका छुटाइरहेका छैनन् । उनी हुन् सुरक्षा पन्त । उनले दीपेन्द्रको निर्देशनमा 'धनपति' र 'चंगा चेट' मा आफ्नो अभिनय कला प्रस्तुत गरिसकेकी छन् । 'धनपति' बक्सअफिसमा औसत रहे पनि 'चंगा चेट' ले राम्रै कमायो । अब फेरि उनी नयाँ फिल्म ‘घर’ मा भित्रिएकी छन् ।
उक्त फिल्म दीपेन्द्रले निर्देशन गर्ने नभए पनि उनकै प्रोडक्सन हाउसबाट निर्माण हुन लागेको हो । फिल्मलाई अर्पण थापाले निर्देशन गर्देछन् । बिहीवार मात्र यस फिल्ममा सुरक्षाको प्रवेश भयो । योसँगै सुरक्षा र दीपेन्द्रले सहकार्यमा ह्याट्रिक गरेका छन् । दुईको एकपछि अर्को फिल्ममा सहकार्य हुनुले बजारमा अनेकन हल्ला चल्न सुरु भएको छ ।
कतै सुरक्षाले आफ्नो करियर चम्काउने अभिभारा दीपेन्द्रलाई त सुम्पिएकी होइनन् ? नभए एकपछि अर्को फिल्ममा दीपेन्द्रले सुरक्षालाई नै रोज्नुको कारण अरु के हुनसक्छ ? सुरक्षाले दीपेन्द्रसँग दुई फिल्ममा काम गरे पनि खासै ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न सकिनन् । अभिनयको प्रशंसा भए पनि करियरले अझै गति समात्न सकेको छैन ।
तर, जे भए पनि भर्सटायल निर्देशकको छवि बनाएका दीपेन्द्रको हात उनले छाडेकी छैनन् । दीपेन्द्रका कुनै प्रोजेक्ट उनले हातबाट उम्काएकी छैनन् । उनी दीपेन्द्रकै भरमा आफ्नो करियरलाई नयाँ दिशा दिने प्रयासमा छिन् । अब भविष्यमा दुईको सहकार्यले निरन्तरता पाउँछ वा पाउँदैन ? यो भने समयले नै बताउनेछ ।